“Salaadiintu Siyaasadda Faraha Hakala Baxaan” Jaamac-Shabeel – Banaadir weyne
Hargeysa – Jaamac Ismaaciil Cige (Jaamac-Shabeel), ayaa ka hadlay wada-hadallada Somaliland iyo Soomaaliya iyo cidda awoodda u leh ee uu sharcigu siiyey, waxaanu tilmaamay in Madax-dhaqameedka looga baahan yahay in aanay faraha la soo galin arrimaha siyaasadda, waxaanu ugu baaqay inay hawlahooda ku eekadan.
Siyaasi Jaamac Ismaaciil Cige (Jaamac-Shabeel), oo u warramay Wargeyska Geeska Afrika ayaa sidoo kale Bulshada baaq u diray, waxaanu ugu horeyn u hadalkiisi ku bilaabay “Salaadiinta waxaa loo doortay oo loo caleemo-saaray arrimaha reeraha iyo inay xal ka gaadhaan dhib kasta, colaad kasta iyo khilaaf kasta oo reeraha ka dhex dhaca. Nabadda ayey ka taliyaan, laakiin Salaadiintu maaha siyaasiyiin, ee siyaasadda faraha ha kala baxaan oo xilkooda reernimo ha ku eekaadaan. Arrinta wada-hadallada Soomaaliya, Xukuumad baa loo igmaday oo ogolaasho loo siiyey, ee Salaadiin ogolaasho looma siin. Salaadiin u igman inay Somaliland wada-hadallada Soomaaliya uga qayb galaa ma jiraan, ogolaanshana uma haystaan. Salaadiintana waxaa looga baahan yahay inay sharciga ilaaliyaan oo kala dambaynta ilaaliyaan, cid walba oo sharciga ka hor timaadana waa in sharciga la hor keena, cidda ay doontaba ha ahaatee, maxaa yeelay sharciga waa loo siman yahay”.
Siyaasi Jaamac-Shabeel mar uu ka hadlayey xanuunka coronavirus ayaa wuxuu yidhi “Coronavirus waa xanuun meel walba taabtay, oo meel walba raad ku yeeshay, oo albaabadii xidhay, isku socodkii waddamada xidhay, dhaqaalihii raad ku yeeshay, laakiin inagu aynu ogaano in wixii qorani ay inagu dhacayaan, oo ALLE aynu barino, dadkuna aad ha isku ilaaliyaan, nadaafaddana aad ha ugu dedaalan”. – Hadhwanaag News